Matio 9 - Ny Baiboly
Matio toko 9
Ilay malemy sitrana - Matio, voantso - Ny amin'ny fifadian-kanina - Fananganana amin'ny maty - Fanasitranana marary - Fandroahana demony.
1Ary niondrana tamin'ny sambo kely izy, dia nita ka tonga tao an-tanànany. 2Dia indro nisy lehilahy anankiray malemy nandry tamin'ny fandriany nentin'ny olona teo aminy. Nony nahita ny finoan'ireo Jesoa, dia hoy izy tamin'ilay malemy: Matokia, anaka, fa voavela ny helokao. 3Tamin'izay ny sasany tamin'ny mpanora-dalàna nanao anakampo hoe: Miteny ratsy an'Andriamanitra ilay io. 4Fa Jesoa nahalala ny eritreriny ka nanao hoe: Nahoana hianareo no mieritreri-dratsy ao am-ponareo? 5Inona no moramora kokoa, ny manao hoe: Voavela ny helokao, sa ny manao hoe: Mitsangàna, ka mandehana? 6Ary mba ho fantatrareo fa ny Zanak'olona manam-pahefana etý an-tany hamela heloka, dia hoy izy tamin'ilay malemy: Mitsangàna, ento ny fandrianao, ary modia any an-tranonao. 7Dia nitsangana izy ka nody tany an-tranony. 8Nony nahita izany ny vahoaka, dia natahotra sy nankalaza an'Andriamanitra noho izy nanome ny olona fahefana toy izany.
9Ary nony niala teo Jesoa dia nahita lehilahy anankiray atao hoe Matio, nipetraka teo am-pamorian-ketra, ka hoy izy taminy: Andeha hanaraka ahy hianao. Dia nitsangana izy ka nanaraka azy. 10Ary raha nisakafo tao an-tranon'i Matio Jesoa, dia nisy poblikàna sy mpanota betsaka tonga niara-nihinana tamin'izy sy ny mpianany. 11Ka nony nahita izany ny Farisiana, dia nilaza tamin'ny mpianany hoe: Nahoana ity Mpampianatrareo no miara-mihinana amin'ny poblikàna sy ny mpanota? 12Fa hoy Jesoa nandre izany: Tsy ny finaritra no mila mpanao fanafody, fa ny marary. 13Mandehana àry hianareo, ka fantaro ny hevitr'izao teny izao: Ny famindram-po no sitrako, fa tsy ny sorona; fa tsy tonga hiantso ny marina aho, fa ny mpanota.
14Tamin'izay, dia nankao aminy ny mpianatr'i Joany ka nanao hoe: Nahoana izahay sy ny Farisiana no mifady hanina matetika, fa ny mpianatrao kosa no tsy mba mifady? 15Ary hoy Jesoa taminy: Moa mahazo misaona va ny zanaky ny mpampakatra raha mbola eo aminy ny mpampakatra? Fa mbola ho avy ny andro hanesorana ny mpampakatra hiala aminy, ka amin'izay vao hifady hanina izy. 16Ary tsy misy olona manampina akanjo tonta amin'ny tapa-damba vaovao, fa handrovitra ny tonta ny vao ka hitatra ny triatra. 17Ary ny barika hoditra tonta tsy mba fasiana divay vaovao; fa raha izany, dia ho vaky ny barika, ka ny divay raraka, ary ny barika simba; fa ny barika hoditra vaovao no fasiana divay vaovao, dia samy maharitra izy roroa.
18Raha mbola niteny izany tamin'ireo izy, dia indro nisy lehiben'ny sinagoga anankiray niditra nanatona sy nitsaoka azy, ka nanao hoe: Tompoko, maty vao izao ny zanako vavy, ka andeha re hametraka ny tànanao aminy, dia ho velona izy. 19Dia nitsangana Jesoa, ka nandeha nanaraka azy izy mbamin'ny mpianany. 20Ary indro nisy vehivavy nitsidrà nandritra ny roa ambin'ny folo taona, nanatona azy avy eo ivohony, ka nanendry ny moron-tongotr'akanjony; 21fa hoy izy anakampony: Na dia ny akanjony ihany aza no ho voakasiko, dia ho sitrana aho. 22Ary nitodika Jesoa ka nahita azy, dia nanao hoe: Matokia, anaka, ny finoanao no nahasitrana anao. Hatramin'izay dia sitrana ravehivavy. 23Nony tonga tany an-tranon'ilay lehibe Jesoa ka nahita ny mpitsoka sodina, sy ny olona maro nitabataba, dia nanao hoe: 24Mialà hianareo, fa tsy maty akory razazavavy, fa matory. Dia nihomehezan'ireo izy. 25Ary rahefa navoaka ny olona, dia niditra izy, ka nandray ny tànan'ilay zazavavy, dia nitsangana io. 26Ary niely tamin'izany tany rehetra izany ny lazan'izany.
27Ary nony niala teo Jesoa, dia nisy jamba roalahy nanaraka azy, sady niantso mafy nanao hoe: Ry Zanak'i Davida ô! mamindrà fo aminay. 28Nony tonga tany an-trano izy, dia nanatona azy ireto jamba, ary hoy Jesoa taminy: Moa mino hianareo fa mahay manao izany aho? Eny, Tompoko, hoy ireo taminy. 29Dia notendreny ny masony, ka hoy izy: Aoka ho tanteraka aminareo araka ny finoanareo. 30Dia nihiratra ny masony, ary Jesoa nandrara azy mafy hoe: Tandremo sao ho ren'olona izao; 31kanjo nony nandeha ireo, dia nampiely ny lazany tamin'izany tany rehetra izany.
32Nony lasa ireo, dia indro nentin'ny olona teo amin'i Jesoa indray ity lehilahy anankiray sady moana no azon'ny demony. 33Ary nony voaroaka ny demony, dia niteny ilay moana ka gaga ny vahoaka sady nanao hoe: Tsy mbola nisy toy izany tamin'Israely. 34Fa ny Farisiana kosa nanao hoe: Ny lehiben'ny demony no androahany ny demony.
35Ary Jesoa nitety ny tanàna sy ny vohitra rehetra, nampianatra teo amin'ny sinagogany sy nitory ny Evanjelin'ny fanjakan'Andriamanitra, ary nahasitrana ny aretina mbamin'ny rofy rehetra. 36Onena izy nahita ireto vahoaka be nijaly sy nafoy toy ny ondry tsy misy mpiandry. 37Dia hoy izy tamin'ny mpianany: ny vary hojinjaina be, fa ny mpijinja no vitsy; 38koa mihantà amin'ny Tompom-bary mba haniraka mpijinja amin'ny variny. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0331 seconds